Internet Waxyaalo (IoT) Waxaan male-awaalnay oo kaliya in xayawaannadayada xayawaannada ah ay nala hadlayaan, laakiin weligaa ma malaynaysaa in gurigaagu kula hadlayo adiga ama baabuurkaaga, albaabka kula hadlaya furayaasha iftiinka! The Internet Tani waxay suurtogal ka dhigtay isku xidhka ku dhawaad ​​wax kasta oo nagu wareegsan. Talaagada, mashiinka dharka lagu dhaqo, microwave iyo xitaa dheryaha, hadda waxba lama taaban aduunka dhijitaalka ah.
Waxaan male-awaalnay oo kaliya in xayawaannadayada xayawaannada ah ay nala hadlayaan, laakiin weligaa ma malaynaysaa in gurigaagu kula hadlayo adiga ama baabuurkaaga, albaabka kula hadlaya furayaasha iftiinka! The Internet Tani waxay suurtogal ka dhigtay isku xidhka ku dhawaad ​​wax kasta oo nagu wareegsan. Talaagada, mashiinka dharka lagu dhaqo, microwave-ka iyo xitaa dheryahaaga, hadda waxba lama taaban aduunka dhijitaalka ah. Waxyaalaha maalin walba haysta ciwaanadooda IP-ga ayaa dhawaan noqon doona xaqiiqada. Xidhiidhka arrimuhu waxa uu noqday aragtidii ugu dambaysay ee tignoolajiyada sheeganaysa in ay horumariso nolosheena. Hase yeeshee, waxaan joognaa heerarkii ugu horreeyay ee IoT. IoT waxay furi doontaa dakhliyo cusub oo dakhli, moodo ganacsi, iyo aragtiyo xagga tignoolajiyada. Marka la eego baaxadda weyn waxay faa'iido u yeelan doontaa labadaba isticmaalayaasha gaarka ah iyagoo siinaya nolol tayo sare leh, raaxada, amniga iyo shirkadda waxay ka caawin doontaa dhimista qiimaha, waxay heleen hufnaan iyo xakameyn wanaagsan oo ganacsigooda. IoT waxay u keeni doontaa mowjado qaybo cusub suuqyada. Qaababka cusub ee isku xirka wireless-ka iyo borotokoollada, moodooyinka ganacsi ee cusub ee leh kharashyada lahaanshaha la dhimay, iyo UI/UX-la'aan dhib la'aan in la xuso. Farsamooyin kala duwan sida Wi-Max, Bluetooth, Wifi, Low Power Wi-Fi, LTE, Ethernet caadiga ah iyo Li-Fi ugu dambeeyay, ayaa durbaba loo isticmaalay in lagu xidho qaybaha kala duwan ee IoT iyo dareemayaasha laakiin sanadkan wuxuu arki doonaa Sigfox, LoRaWAN iyo 3GPP's narrowband (NB) oo la tijaabinayo. Shirkadaha, dhanka kale, waxay heli doonaan faa'iidooyin waaweyn IoT. Shaqada fog, dabagalka alaabada, iyo maaraynta, hufnaanta iyo wax soo saarka, xawaaraha iyo gelitaanka, ayaa ah meelo yar oo tignoolajiyadu ka shaqayn doonto yaabab.
Qalabka guriga ee caqliga leh ayaa u oggolaanaya milkiilayaashu inay xakameeyaan oo ay la socdaan tiro balaadhan oo toosan sida korjoogteynta guriga oo la hagaajiyay, xakamaynta gelitaanka, amniga, iyo hufnaanta tamarta. Noocyo badan ayaa ku jira guryaha caqliga leh waxay iska kaashanayaan aalado kala duwan si ay uga dhigaan kuwo xariif ah, waxtar leh oo sugan. Aalado badan sida Eskesso, Samsung qaboojiyaha smart iyo Genican ayaa siyaabo wanaagsan oo macquul ah ugu daraya nolosha qof walba. Amazon Echo waa aalad kale oo caqli badan oo u shaqeysa sidii CPU dhammaan aaladaha gurigaaga. Qalab kale oo caan ah oo ah Thermostat Learning, oo ay soo saartay Nest, ayaa si otomaatig ah u hagaajisa heerkulka guriga iyada oo loo marayo dareemayaal gundhig ah. Qalabkan ayaa hadda xoogaa qaali ah, sababtoo ah kharashyada horumarinta iyo iibka oo aad u hooseeya. Laakiin marka hore loo sii socdo, sicirrada ayaa la filayaa inay hoos u dhacaan taasoo ka dhigaysa kuwo la awoodi karo macaamilka caadiga ah. Dhawaan waxaan sidoo kale arki karnaa kaaliyayaal shaqsiyeed iyo robots oo dhex socda guryaheena tanina waa qayb yar oo IoT ay u socoto. Xitaa gudaha daryeelka caafimaadka warshadaha, IoT ayaa calaamad ka dhigaysa. Fikradda 'sariiraha caqliga leh' ayaa laga hirgelinayaa dhowr isbitaal oo ogaan kara dhaqdhaqaaqa bukaanka isla markaana hagaajin kara dhererka si aan loogu baahnayn kalkaaliyeyaal ama faragelin bini'aadan. Waxa kale oo jira soo -saareyaasha dawooyinka guriga oo soo socda kuwaas oo raadraaca haddii daawada la qaato waqtigeeda ama aan la helin iyada oo la kaashanayo xogta lagu kaydiyey daruurta. Raad-raacayaasha macluumaadka caafimaadka ee ka caawinaya is-dhexgalka bukaanka-dhakhtarka ayaa sidoo kale u furaya waddooyin loogu talagalay aaladaha caqliga leh si ay u keenaan natiijooyin aad u wanaagsan xagga berrinka daryeelka caafimaadka. Iyada oo tiknoolijigu bilaabay in meel walba laga hirgeliyo, waxay keenaysaa natiijooyin aad u weyn iyadoo yarayneysa kharashaadka, natiijooyinka daawaynta oo la hagaajiyay, waayo -aragnimada bukaanka oo la xoojiyay, khaladaad yaraaday, maareynta daawooyinka oo la wanaajiyay iyo maaraynta cudurrada oo la hagaajiyay.
Marka laga reebo IoT oo la isticmaalayo guryaha caqliga leh, caqli badan nidaamka ammaanka ama qalabka tamarta ee bixiya raaxada iyo fayoobaanta shakhsi ahaaneed, waxay u gudubtay inay ka dhigto magaalooyinka kuwo caqli badan. Iyada oo ujeedadu tahay isku xirka sirdoonka iyo macluumaadka aaladaha, shirkado kala duwan ayaa ka shaqeynaya sidii loo dhisi lahaa shabakad isku xiran oo isku xiran. Isku-dhafka ah ee Analytics, xogta weyn, iyo isku xidhka meel walba ka jira ayaa keenaya awoodo cusub oo aad u weyn sida in la xakameeyo oo la maareeyo aaladaha, awoodda lagula socdo meel fog iyo in la dhiso fikrado laga helo xog badan. Sidaa darteed IoT waxay si firfircoon u beddeshaa kaabayaasha guud ee magaalooyinka iyadoo yaraynaysa ciriiriga taraafikada, wanaajinta gaadiidka dadweynaha, abuurista adeegyo tayo leh oo waxtar leh oo degmada ah iyo ilaalinta dadka ku hawlan oo ammaan ah. IoT waxay isku xireysaa dhowr qalab oo casri ah maalin kasta, sanadaha soo socdana, waxaan ku hareerayn doonnaa ilaa 24 bilyan. Aaladda IoT. Hadda taasi waa war weyn! Marka laga reebo guryaha caqliga leh, nidaamyada keydinta tamarta ee caqliga leh, aaladaha caqliga leh ayaa sidoo kale dadka ka caawiya inay la socdaan caafimaadkooda iyaga oo leh dib-u-celinno dawo oo dhammaystiran. Baabuurta isku xiran waxay isku xiraan infra ee magaalooyinka caqliga badan si ay u bedelaan qaababkii caadiga ahaa ee darawaliintu hore u raaceen. Laakiin faa'iidooyinkan ayaa waliba keena khataraha.
Macluumaad dheeri ah - xog aad u badan ayaa lagu darayaa ilbidhiqsi kasta Aaladda IoT tanina waxay hubaal u abuuri doontaa dhibcaha gelitaanka jabsadayaasha internetka
Kalsoonida shacabka - Sannadkii 2015, Maamulka Xakamaynta ee Smart Home wuxuu ogaaday in dadku aad uga walaacsan yihiin xogtooda in la xado guryaha caqliga leh. Tani waxay noqon kartaa hal sabab oo muhiim u ah in macaamiishu aysan si fudud ugu beddelin IoT. The Internet of Things waa heerka xiga ee qalabaynta iyo soo bixitaanka teknolojiyad cusub ayaa hubaal ahaan hagaajin doonta dhinacyo badan oo nolosheenna ah hadday tahay shaqada ama guriga. Sannadkan waxay arki doontaa IoT oo ku koraysa wershado tirilyan oo doolar oo keliya ah haddii la fiiriyo welwelka amniga iyo asturnaanta.